युरोप अमेरिका पुगेका सबै नेपालीको आफ्नै देश नेपाल फर्किने चाहाना – Online Nepal
युरोप अमेरिका पुगेका सबै नेपालीको आफ्नै देश नेपाल फर्किने चाहाना
April 17, 2020 300
काठमाडौं । आफ्नो र परिवारको सुन्दर भविष्य खोज्दै अमेरिका लगायत युरोपका देशहरुमा पुगेका नेपालीहरु अब आफु जन्मेको देश फर्कन चाहान्छन् । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाले यी देशहरुमा ठुलो संकट उत्पन्न गराएको छ । अमेरिकामा मात्रै झण्डै ३ करोड आसपास व्यक्तिहरु बेरोजगार हुने संकेत देखिएको छ । खाडीमा बस्ने नेपालीहरुको अवस्था पनि चिन्ताजनक नै छ ।
रेमिट्यान्सका भरमा चलेको र सियो पनि विदेशबाट ल्याउने नेपालका लागि अब थप चुनौती थपिएको छ । नेपालको मात्रै होईन, विश्वका धेरै देशको अवस्था अहिले खराब भएको छ । विशेष गरेर विदेशमा जागिर वा पेशा गरेर बस्नेहरु समस्यामा परेका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण महिनौंदेखि अमेरिकामै रोकिएका नेपालीहरु देश फर्किन पाउनुपर्ने भन्दै सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । विभिन्न भिषामा अमेरिका पुगेर थुनिएका नेपाली नागरिकले नेपाल सरकारसँग आवश्यक पहल थाल्न आग्रह गरेका हुन् । सरकारले तोकका आवश्यक सबै प्रकृया पूरा गर्न आफूहरु तयार रहेको भन्दै स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने माग उनीहरुको रहेको छ ।
सर्वोच्व अदालतले पनि विदेशबाट फर्कन चाहनेहरुलाई फर्कन दिनुपर्ने आदेश सरकारलाई दिएको छ । सरकार अहिलेको तत्कालिन अवस्थामा विदेशमा भएका नेपालीहरु स्विकार गर्न तयार छैन । अमेरिकामा रहेका नेपालीहरु आफुहरु स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सरकारका सबै प्रकृया पूरा गर्न तयार रहेको बताउँछन् । नेपाल आएर सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइनमा पनि बस्न तयार भएको भन्दै स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउन उनीहरुले सरकारसँग अपिल गरिरहेका छन् । भ्रमण भिषामा अमेरिका आएका सन्तोष सुवेदीले ल्याएको रकम सकिन लागेको र अमेरिकामा बस्न अन्यौल भएको भन्दै नेपाल फर्काउन सरकारसँग आग्रह गरे ।
Prevप्रधानमन्त्रीले बोलाए बैठकः गाउँ फर्किनेहरुबारे निर्णय हुदैं
Nextखुशीको खबर : नेपालमा संक्रमित मध्ये को*रोनालाई २ जनाले जिते !
सिंगापुरे लाहुरेबारे बाहिरियो यति ठुलो रहस्य, सोनुको पूर्व प्रेमीलाई यसरी पठाए लाहुरेले म्यासेज (हेर्नुहोस भिडियो)
नयाँ नक्सा सरकारको कमजोरी र बैइमानी भन्दै फेरी बोलिन सरिता गिरी
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (62071)
तल्लो पेट दुखेर अस्पताल पुगेकाको जाँच गर्दा डाक्टर नै च*कित हुने देखियो विश्वकै दुर्लभ घ*टना (37998)